EyoMsintsi 01, 2016 by okwenyaniWW, Iimbono zizonke:
Okubhaliweyo kulo naluphi na uluhlu lodweliso lwezindlu nomhlaba kukuqulatha lonke ulwazi olufanelekileyo malunga nento leyo: idilesi, inani lamagumbi, indawo yokuhlala yento (zombini kunye neyokuhlala), ubungakanani bekhitshi, ulwazi lwangasese kunye nokunye ivuliwe.
Xa ubhala uluhlu lwezindlu nomhlaba kubalulekile ukugxila ekufikeleleni kwezothutho.
Inqaku elibalulekileyo xa ubhala uluhlu lwepropathi yendawo yokuhlala: imeko esemthethweni yepropathi: ixesha elingakanani elingumnini, ubunini babini bengabanini, kwaye bangaphi abantu ababhalisiweyo kwinto leyo, kwaye ukuba lolunye uhlobo lolunye olo kuthengiselo lolunye uhlobo Nye.
Ngokumalunga noluhlu lwerenti yokurenta izindlu nomhlaba, lwakhiwe kumgaqo-siseko ofanayo nowentengiso yentengiso yepropathi, kodwa apha kuya kufuneka ubeke ugxininiso kwezinye zeendibano ezingabalulekanga xa uthengisa. Okokuqala, kufuneka ubhale malunga nexesha lokuqeshisa: yonke imihla, iinyanga ezininzi okanye uzinze. Okwesibini, chaza ngokweenkcukacha imeko yepropathi: ukulungiswa, ubukho befanitshala kunye nezinto zombane, umabonakude wekhebula, okanye umabonwakude wedijithali, ukufikelela kwi-Intanethi.
Kwaye ukuze sinciphise inani leminxeba engeyomfuneko, kuyanqweneleka ukuba kuboniswe kwangoko iminqweno yabo baqeshi bexesha elizayo "baqeshise ngendawo yokuhlala abantu abatshatileyo", "akukho zilwanyana zasekhaya", "kunokwenzeka kubantwana". Ukuba kuyimfuneko, chaza elona nani liphezulu labahlali, indlela abajonga ngayo abantwana abancinci, abantu abadala kunye nezilwanyana ezifuywayo. Qiniseka ukuba ubonakalisa ekupheleni okanye ekuqaleni kokudweliswa kolwazi loqhagamshelwano lomthengisi: igama, umnxeba, ixesha elifunwayo lokufowuna.
Kwisicatshulwa soluhlu lwepropathi yendawo ethengisa izindlu nomhlaba ngokuqeshisa okanye ukuthengisa, kubalulekile ukuba ube une-anchor ukuchaza imbonakalo yendawo yokuhlala okanye yendlu, onokuthi ugxile kuyo abathengi.
Umzekelo, ukuba iflethi yinto elungileyo elungisiweyo, kufuneka ugxininise kuyo, kodwa ungalibali ukubonisa umhla wokulungiswa kwemisebenzi kwaye ubanike uluhlu olufutshane.
Rhoqo, abathengi banomdla, kulo mzekelo, apho iifestile ezijonge ngaphezulu. Unokwenza ugxininiso oluqinisekileyo, umzekelo, ukuba indlu iyakhanya, kuba iifestile zijonge ecaleni kwelanga, okanye zithule xa ziphuma ziye eyadini.
Xa uchaza "ii-anchor" ukhetha ukubamba ulwimi olomileyo kunye nokusebenzisa amabinzana amafutshane emvakalelo. Ngoncedo lwabo, ungakhawuleza "ukufikelela" kumthengi.
Ukwenzela ukugxininisa isidima sento, kuyanqweneleka ukusebenzisa i-epithets: "ebanzi, intofontofo, indlu eqaqambileyo," "Ivenkile ephantsi engabizi mali kumgangatho ophantsi", "ifanitshala kunye nezinto zombane zesipho" okanye " umbono omangalisayo ngokutshona kwelanga. ”
Umgaqo ophambili awuyonto yokuba lonke ulwazi olufunekayo kufuneka lunikezwe ngendlela efanelekileyo kwaye lungaqulathi ulwazi olungenamsebenzi.
Ukwenza uluhlu lokuthengiswa kwezindlu nomhlaba luthengise abathengi, kufuneka lube lungaqhelekanga, lungalibaleki kwaye lungakhethi. Umzekelo, intengiso enomxholo othi "Thenga indlu kwaye ufumane ikati yesipho" iya kutsala umdla womthengi onokubakho, kwaye iya kwiphepha lokufunda inkcazo yento.
Nangona kunjalo, ayizizo zonke iibinzana ezibambekayo ezinokusetyenziswa xa ubhala uluhlu lwezindlu, ezinye ziya kuba nesiphumo esichasene ngokupheleleyo kwaye ziyaothusa abathengi.
Umzekelo, ukuba uyachaza ukuba "ecaleni kwendlela ehamba ngeendlela ezininzi ngaphandle kweendlela zokugcobhoza", okuthetha ubukho bengxolo yeemoto rhoqo nongcoliseko lomoya ngamagesi aphuma ngaphandle. Akunakwenzeka ukuba kuya kuba ngumdla kumthengi. Kwimeko efanayo iphawulwe “ngokujonga indawo yokudlala yesikolo”, “indawo yokujonga phambili, eyakhiwe ngenkuthalo.” Kwimeko yokugqibela, le "nyaniso" ayinakulunga ukusebenza, kuba akekho umntu ofuna ukuphila iminyaka embalwa indawo yokwakha.
Ukongeza, kuya kufuneka ulumke ngamagama anjengokuthi "ukuhamba ngeenyawo kwisitishi ukusuka apho unokuya khona ngokulula nangayiphi na indlela. Eli binzana libonakala ngathi lithetha ngofikelelo olufanelekileyo lokuhamba, kodwa kwelinye icala linokudityaniswa nobumdaka. , ukuhamba kwabantu okukhulu, okanye okubi nangakumbi - ngemeko yolwaphulo-mthetho oluntsonkothileyo.
Rhoqo, umthengi, ujonga uluhlu lwezindlu, uzibona njengomfanekiso, kubandakanya nenxalenye yesicatshulwa, ukuba ifonti ikhethwe ngobulumko. Ke ngoko, kuluhlu lweearhente zorhwebo yinto engcono ukuyisebenzisa eqhelekileyo kwaye ikhululekile kumbono weefonti ezifana neAgency, Times New Roman, eCalibri. Kungcono ukunqande ukukhetha okungaqhelekanga, kuba olo luhlu lwezezindlu alunakufundwa lula.
Ukuqaqambisa, kukhetheke ngakumbi ukusebenzisa iindlela ezisemgangathweni, umzekelo, u-italic, krwela, okanye kraca. Kungcono ukubonisa ubuchule kwimbonakalo, njengoko sele kutshiwo, kubeka umthengi kwifashoni efunekayo.
Ayizizo zonke iisayithi ezinokuvumela abathengi babo ukuba batshintshe iifonti zoluhlu lweearhente zorhwebo, ngelixa kunokwenzeka kwi-realWW.
Ithegi yexabiso ngokubhuka
Ixabiso lelinye lamanqaku abaluleke kakhulu kuludwe lwezindlu kunye nentengiso. Kuthengiso oluyimpumelelo, kufanele lube ngumndilili okanye kancinci kancinci kunakwindawo.
Ukuba ufuna ukuthengisa indlu ngokukhawuleza, akukho mfuneko yokuba ubhale kwisibhengezo malunga "nentengiso engxamisekileyo". Kwelinye icala, kubonwa ngabathengi njengobuqhophololo obunokubakho kwicala lomnini. Kwelinye icala -Baxumi banokufaka isicelo sesaphulelo esongeziweyo. Kuyacaca ukuba akukho nokuba enye okanye enye inketho ayifanelekanga kumthengisi.
Ukuba ubhala kuluhlu lwezezindlu "ngamaxabiso okuxoxa", ke ngoko kuyakwazisa kwangoko ukuba indlu yakho ayifanele ixabiso elichaziweyo. Unokusebenzisa yonke "ii-anchor" ezifanayo. Umzekelo, ukuba ixabiso lezinto liphantsi nje kwexabiso lentengiso, ungabhala kuluhlu lwepropathi 'yeyona nto intle kwindawo.'
Uluhlu lweearhente zepropathi malunga nokuthengisa, ukuqeshisa kufuneka kuhanjiswe nefoto esemgangathweni olungileyo.
Ezona mpazamo ziqhelekileyo ezenzeka kuluhlu lwesibini lokuthengiswa kwezindlu
- Ifoto ithathwe ngokuhlwa
Ukuthintela izehlo ezohlukeneyo, ndicebisa ukuba uthathe isithombe phambi kweflethi emva kokuba uphume, kuba imifanekiso yamagumbi, apho izinto zisasazeke kwaye ikhutshiwe, inokufaka imvakalelo yokugxeka kunye ne-antipathy.
Iifoto kufuneka zitywinwe kuwo onke amagumbi asefulethini, kuba indlu ngokwayo, iyinqweneleka ukuba iifestile zibonelele ngombono olungileyo. Kwakhona kuya kuba licebo elilungileyo ukuthatha ifoto yezindlu kwiindawo ezihlanganayo.
Ngapha koko, ifoto kufuneka ibonise ubukho befanitshala eyakhelweyo kwigumbi lokuhlala, kwigumbi lokugcina okanye kwigumbi lokugcina iimpahla, ii-niches zokugcina, iilogo kunye neebhaloni, ukuba zikhona.
Uluhlu lweearhente zeeNdawo. Yenza intengiso yasimahla kwiWebhusayithi yeHlabathi
okwenyaniWW Septemba 1, 2016
Olu ngeno yafakwa kwi Intengiso yeNtengiso yePropathi noqhotyosho Uluhlu lwasimahla lweZindlu, Uluhlu lweArhente yeZindlu zeHlabathi, Uluhlu lweeNdawo zeZindlu amaZwe simahla, Uludwe, Uluhlu lwentengiso yearhente, Uluhlu lweNdawo yeNtengiso ye-Intanethi, Thumela Uluhlu lweeNdawo zokuThengisa, Thumela uluhlu lweearhente zeZindlu simahla, Uluhlu lwePropati, Izindlu ezithengiswayo, Uluhlu lweArhente yeArhente yeNtengiso, Uluhlu lweearhente zentengiso, Uluhlu lweNkampani yeZakhiwo, Uluhlu lwezezindlu, Uluhlu lweearhente zentengiso, Uluhlu lweeNtengiso zeNtengiso, Uluhlu lweeNdawo zeZindlu simahla, Uluhlu lweearhente zeZakhiwo kwi-Intanethi, Uluhlu lweeNdawo zeNdawo zokuThengisa izindlu, Uluhlu lwentengiso. Bookmark le Permalink.
Septemba 2, 2016 Uluhlu lweNdlu. Yenza intengiso yasimahla- i-realtyWW yasimahla kwiwebhusayithi yokuthengisa izindlu nomhlaba. Ukuposa uluhlu lwendlu nceda ulandele eli phepha Ukuze uthengise indlu ngokukhawuleza nangexabiso eliphakamileyo, ungaweli ngenxa yebheyile kubarhwaphilizi, kuya kufuneka wenze uluhlu olunobuchule bendlu. Kweli nqaku, asizukujongana nemicimbi yokulungiswa kwendlu ngaphambi kokuba ithengiswe, njl., Kwaye siza kuthetha kuphela kuluhlu lwendlu (kucingelwa ukuba uyazi malunga nokubaluleka kokulungiswa kwendlu ngaphambi kokuthengisa). Intengiso […] exhonyiweyo Intengiso yeNtengiso yePropathi
Septemba 12, 2016 Uluhlu lweeVenkile. Yenza intengiso yasimahla- i-realtyWW yindawo yokuthengisa iwebhusayithi yokuthengisa izindlu nomhlaba. Ukuthengisa kunye namagumbi kwiwebhusayithi yethu nceda ulandele eli phepha Nje ukuba umnini-ndlu uthethathe isigqibo sokuyisebenzisa kwintengiso kwaye weza nezindlu ngolungelelwano, lixesha lokuba aqalise ukukhangela abathengi. Oku akukho sivumelwano esikhulu, nangona inani labantu abazimisele ukuthengisa indlu ligqitha kwinani labo abazimiseleyo ukuyithenga. Uyenza njani uluhlu lwamagumbi? Ungapapasha njani usebenzisa amagumbi […] exhonyiweyo Intengiso yeNtengiso yePropathi
Septemba 19, 2016 Uluhlu lweMihlaba. Yenza intengiso yasimahla- i-realtyWW yindawo yokuthengisa iwebhusayithi yokuthengisa izindlu nomhlaba. Ukuthengisa ngentengiso yomhlaba okanye irente kwiwebhusayithi yethu nceda ulandele eli phepha Ke, isiqwenga somhlaba silungisiwe kwaye lixesha lokuba uqhubele phambili kwinqanaba lokuthengisa. Eyona ndlela isebenzayo yokuthengisa umhlaba lilizwi lomlomo kunye nokudweliswa komhlaba. Kutheni le nto abantu bafuna ukuthengisa umhlaba ngaphandle kwabameli? Umnqweno wokuthengisa umhlaba ngokuzimeleyo ubangelwa koku kulandelayo: Umthengisi udiniwe ngabaxhasi bezindlu abaphazamisayo; Abantu ba […] exhonyiweyo Intengiso yeNtengiso yePropathi
Juni 6, 2016 Malunga ne-realtyWW - INethiwekhi yeNtengiso yasimahla yeHlabathi kwiHlabathi liphela i-realtyWW yindawo yokuthengisa iwebhusayithi yokuthengisa izindlu nomhlaba. Ngenxa ye "realtyWW" ungakhawuleza uthenge, ukuthengisa, ukuqesha kunye nokurenta iipropathi kwihlabathi liphela, ngaphandle kwendawo okuyo. Ingaba yi-USA, Canada, UK, Ireland, Australia, Philippines, Singapore, India, New Zealand. Eyona nto iphambili yeWWW, yindawo yokuhambisa uluhlu lwasimahla. Xa yonke intengiso okanye inqaku ngalinye lisasaza kwii-medias zentlalo zasimahla. Oku kunokunyusa kakhulu ukuguqulwa kwentengiso xa […] exhonyiweyo Intengiso yeNtengiso yePropathi
Ngamana 3, 2016 Khetha kwiwebhusayithi "yokweneneWW" yendlu yephupha lakho Ukukhutshwa kwamaphephandaba yi: Olesja Poberezhets Ukraine, "realWW" - iprojekthi enamabhaso yokuthenga indlu kwihlabathi liphela ngaphandle kokuphuma. Ngenxa "yenyani yeWW" unokuthenga lula, uthengise, uqeshise kunye nepropathi yokurenta kwihlabathi liphela, ngaphandle kwendawo okuyo. Ingaba yi-Egypt, Philippines, Korea, Japan, Greece, France. Vulela umbono wakho. "realtyWW" yenziwa ziingcali zaseUkraine njengenguqu yenkqubo ejolise kuluntu. "realtyWW" isimahla kwaye ihlala ikhona. […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba
Disemba 7, 2016 Iingcebiso ze-4 ze-Instagram zeAgents Uninzi lweearhente zeearhente zibanjwa kwimithombo yeendaba zentlalo. Ngelishwa, abava impumelelo enkulu ngenxa yokungazinikezeli kunye nokusetyenziswa okungalunganga. Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba uyeke ukusebenzisa imidiya yoluntu. Ubukho beendaba zosasazo lubalulekile kumthengisi ngamnye wepropathi. Eyona nto kugxilwe kuyo kwiinzame zokuthengisa kufuneka kube kukungena kubaphulaphuli abaninzi. Ezi ntsuku, kukho amaqonga eendaba ezentlalo eziphambili, nangona kunjalo, oku kunokuba nzima ukufumana ukuba zeziphi ezisebenza […] exhonyiweyo Intengiso yeNtengiso yePropathi
Aprili 17, 2017 Iindleko ezisi-7 eziqwalaselweyo xa kuqeshiswa ngendlu Nokuba ufuna ulwazi ngerenti entsha ukuze uhambisane kunye neqabane lakho okanye ulizenzele ngokwakho, lilitye elinqabileyo lokufuna kwakho ukuzimela. Ukuzingela igumbi kungonwabisa, nangona kunjalo, ungaphazanyiswa kakhulu kwaye ulungiselele izinto ezibaluleke ngakumbi-iindleko ezifihlakeleyo nezingalindelekanga eziza nokuqasha. Akukho mathandabuzo ukuba ukuhamba kuyabiza. Ukuba awukwazi ukuzibophelela ukuthenga indlu yakho ngenxa yemiqobo yemali, uyazi ukuba ukuqeshisa ngeflethi akuthethi njengoko […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba
Novemba 15, 2018 Ukutyala imali kwi-Real Estate- Izizathu zokuzimasa iisemina zotyalo-mali Iisemina zeearhente zepropathi ziyafumaneka ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo. Nokuba ufuna into ehlaziyayo engakunika ukuzithemba okanye inyani entsha kwinkqubo yokuthenga ekhaya, unokufumana isemina kwindawo yakho enokukunceda apha endleleni. Kukho izizathu ezahlukeneyo zokuba abatyali mali bezindlu baqhubeke ukubuyela kolu hlobo lomsitho. Kucacile ukuba kuninzi okunokufunyanwa kwezi semina, kubandakanya izibonelelo ezininzi ngexesha ngalinye lokuzimasa. Inethiwekhi […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba
Septemba 6, 2016 Izibhengezo zentengiso kwizinga eliphantsi kwiNtengiso yeNtengiso yeArhente yeHlabathi yehlabathi i-realtyWW yindawo yokuthengisa iwebhusayithi yokuthengisa izindlu nomhlaba. Ukuthengisa ngentengiso yesibhengezo ngexabiso eliphantsi kwiwebhusayithi yethu nceda ulandele eli phepha le-Intanethi-yile nto izisa ingeniso esisiseko kunye nene. Yazala iintlobo ezahlukeneyo zezisombululo zenethiwekhi, ivuselela abatyali mali kunye nabaphuhlisi. Inezikhokelo ezininzi kunye neendidi kwaye zezona ndawo ziphucukileyo kwaye zitshintsha indawo ye-Intanethi. Eli nqaku yinkcazo enye kuphela […] exhonyiweyo Intengiso yeNtengiso yePropathi